Myat Shu - စကားပြေလက်ရာသန့်
You are here : Myat Shu » Archives for စကားပြေလက်ရာသန့်
Published By Myat Shu On Wednesday, June 15th 2011. Under စကားပြေလက်ရာသန့်
အင်း.. ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်ရှင် ….။ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေကား၊ မြန်မာများ၏ စိတ်ကို အမျိုးမျိုး ပြုပြင်ပေ၏တကား။ အထူးသဖြင့် မြန်မာကလေးများ၊ မြန်မာမိန်းမများ၏ စိတ်ကို အမျိုးမျိုး ပြုပြင်နိုင်လေသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်တွင် ကောင်းမွန်သော ရုပ်ရှင်များကိုသာ လိုအပ်၏။ မကောင်းသော ရုပ်ရှင်များကို မလိုအပ်ပေ။ ဗိုလ်ဝတို့၊ ဗိုလ်လရောင်တို့၊ ဗိုလ်တကာ့ဘုရင်တို့ ကောင်းစားကြသော ခေတ်တုန်းက မြန်မာပြည်တစ်လွှားမှာ ဗိုလ်အများ သောင်းကျန်း၍ သွားကြလေသည်။ မြို့တိုင်းမြို့တိုင်း၊ ရပ်တိုင်းရပ်တိုင်း၊ ရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာပင် ကလေးများ တုတ်ကလေးတွေကို ရမ်းကာ ဓားကစားဟန် ပြုလုပ်ကြကုန်၏။ ယောက်ျားကလေးများသာ မဟုတ်။ မိန်းကလေးများပင် ဤသို့ ကစားခြင်းကို ပြုလေ့ရှိကြလေသည်။ ထို့နောက် များမကြာမီအတွင်းမှာပင် သာယာဝတီတွင် သူပုန်ကြီး ထပြီးလျှင် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, February 12th 2011. Under စကားပြေလက်ရာသန့်
အညာဘုရားပွဲကား ဘုရားပွဲလည်း ဖြစ်၏။ ဈေးပွဲကြီးလည်း ဖြစ်လေသည်။ အညာတွင် ဘုရားပွဲသွားကြသည်မှာ ဘုရားလည်းဖူးရင်း၊ လိပ်ဥလည်းတူးရင်း၊ လိပ်မကြီးလည်းဖမ်းရင်း သွားကြခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားဖူးရ၊ ပျော်လည်းပျော်ပါးကြ။ ဈေးလည်းရောင်းရ၊ တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ်သော အညာဘုရားပွဲများပေတည်း။ အညာတွင် ဘုရားပွဲသွားလိုသူတို့သည် မိမိတို့၌ ရောင်းရန်ရှိသော အရာဝတ္ထုများကို ယူဆောင်သွားကြပြီးလျှင် ဆိုင်းများခင်းကျင်း၍ ရောင်းချကြလေသည်။ တစ်ဦးတွင် ပါလာသော ပစ္စည်းကို တစ်ဦးက၀ယ်နှင့် ပစ္စည်းများကို ဘုရားပွဲ၌ ဖလှယ်လေ့ရှိကြလေသည်။ နံနက်ခင်းတွင် အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ကြပြီးနောက် ညနေမိုးချုပ်လျှင် ပွဲကြည့်သူကြည့်၊ ဘုရားဖူးသူဖူး၊ လှည့်လည်ကြည့်ရှုသူ ကြည့်ရှုနှင့် နေကြလေသည်။ အညာဘုရားပွဲကား ဘုရားပွဲနှင့် ဈေးကိုတွဲ၍ ထားသောကြောင့် တစ်လကိုးသီတင်း စည်ကားလေ့ရှိလေသည်။ ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲမှာ တစ်လကျော် နှစ်လနီးပါး စည်ကား၏။ ကျောင်းတော်ရာ၊ ... Continue Reading